Xukun maanta lagu ridayo nin ka soo qayb qaatay dagaalada Suuriya oo jidh dil soo geystay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xukun maanta lagu ridayo nin ka soo qayb qaatay dagaalada Suuriya oo jidh dil soo geystay
La daabacay torsdag 26 februari 2015 kl 10.25
Maanta gelinka hore waxaa la sugayaa xukun ay maxkamad Sweden ku rido nin 28 sanno jir ah oo ka soo jeeda dalka Suuriya, kaas oo lagu soo oogay dacwad la xiriirta ku xad gudub xaquuq insaanka iyo tuhun la xiriira jidh dil xad dhaaf ah.
Jidh dilka ayaa la tuhmayaan in ninkan ku kacay xagaagii sannadkii 2012, markaas oo uu ka qayb qaadanyey dagaalka ka socda dalka suuriya, waxuuna la safnaa kooxda mucaaradka ah ee dalkas ka dagaalamayasa. Qofka uu ninkan jirdh dilka u geystay ayaa ahaa maxbuus ka tirsanaa dowladda rajimka Assad ee dalkas ka talisa.
Cadeymaha ninkan lagu hayo ayaa ah film muujinaya asaga oo garaacaya qof maxbuus ah.
Ruux ay ninkan 28-jirka ah isyaqaaniin ayaa booliska Sweden ku dacweeyey, kaas oo booliska u gacan geliyey filmkan muujinaya garaacista uu ninkan u geystay maxbuuska. Sida uu ninkan ku helay filmka muujinaya jirdh dilka ayaa aheyd, ka dib markii ninkan uu ku booqday gurigiisa si uu uga caawiyo tikid in uu iibsado. Markii uu galay kombiyuuterkiisa ayuu ku arkay filmka muujinaya jidh dilka uu ninka 28 sanno jirka ah u geysanayo maxbuuska, ka dibna si qorsoodi ay ayuu filmka moobilkiisa ugu soo degsaday, una gacan geliyey booliska.
28-jirka ayaa markii arrintan booliska ka wareystay inkiray falkan, balse ka bacdii marka filmka uu ku jirdh dilayo maxbuuska la tusay ayuu qirtay falka lagu soo eedeeyey, isaga oo ku dooday in uu maxbuuska uu si tartiib ah u garaacay keliya, laguna qasbay in uu garaaco.
Sida ay sheegtay Hanna Leoine oo ah xeer illaaliyaha maxkamadda, dacwadda 28-jirka lagu soo oogay ayaa ah tii ugu horeysay nooceeda oo denbiile ka soo qayb qaatay dagaalada sokeeye ee Suuriya ka socda lagu soo oogo.